Korea Atsimo: Blaogy, Blaogera Ary Marika · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 15 Aogositra 2018 9:27 GMT
(Fanamarihana: ity lahatsoratra ity dia navoaka tamin'ny volana martsa 2009)
Raha sahala amin'ny toa misy elanelana ireo samy blaogera, ny tena marina tsy dia izay loatra izy ireo. Manana ny blaoginy sy blaogera ankafiziny izy ireo, ary mamorona rohy miaraka amin'ireny ry zareo. Zarain-dry zareo miaraka amin'ireo vohikala hafa ireo lahatsoratra ankamamiany nosoratan'ireo blaogera hafa. Maneho ny heviny izy ireo momba ny lahatsoratr'ireo blaogera izay tsapany ho akaiky azy kokoa ary mifanakalo ny fomba fijeriny mikasika ireo olana politika sy sosialy.
Vehivavy blaogera iray no nitantara ny zavatra niainany niaraka tamina mpitarika orkesitra iray fantadaza erantany. Tamin'ny famoahany an'ireo resaka manokana nifanaovan'izy ireo, vitany ny namotika ny lazan'ity olo-malaza iray ity. Raha toa niely patrana haingana tamin'ireo vohikala hafa ny lahatsorany ary ireo blaogera hafa namerina naka izany indray ho ao amin'ny blaogi'izy ireo manokana, marobe ireo blaogera no nitsikera azy. Mifanohitra amin'izay, fandresen'ireo blaogy no hitan'ireo hafa tao anatin'izany.
Manontany tena ireo blaogera hoe hatraiza no tokony halehan'ireo blaogy amin'ny fizaràna ireo vaovao, hevitra ary traikefa. Blaogera iray no nandefa lahatsoratra iray mahaliana mikasika an'io lohahevitra io, “Blaogy, blaogera, marika ary ireo lesoka manasaraka azy” [amin'ny teny koreana].
Rehefa mikarakara ny blaogiko manokana aho, toa tsapako fa misy ireo olona mahalala fomba. Ekena, misy ihany koa ireo olona hafahafa. Saingy mihevitra aho fa mahalala fomba ireo blaogera amin'ny ankapobeny. Marina io raha toa tsy asiana ny fahasamihafàna eo amin'ny blaogera sy ilay tena olona hita maso.
Fomba iray hahafahan'ireo olona maneho hevitra ny blaogy. Izay no antony hitandreman'ireo blaogera ny blaoginy amin'ny fony rehetra. Resy lahatra ihany koa izy ireo fa mavitrika ao anatin'ny fiseraseràna amin'ireo hafa ary manana fisokafan-tsaina goavana. Rehefa maneho ny hevitr'izy ireo any anatin'ireo fanehoankevitra amin'ireo blaogy hafa ry zareo, mijanona ho mahalala fomba, tsy mamela lahatsoratra hafahafa na tsy misy ifandraisany.
Ndeha isika hieritreritra bilaogera roa. Mihevitra tsara izy ireo fa mifankahalala. Samy mitsidika ny blaogin'ny iray avy ny tsirairay ary mamela fanehoankevitra. Mifanakalo hevitra izy ireo. Manao vazivazy vitsivitsy. Mihevitra izy ireo fa mitovy ny tahan'ny fifankahazàran'izy roa tonta.
Rehefa mifampitazana amin'io fomba fijery io izy ireo, mitovy ny fifamalian'ny fifankahazàrany.
Indray andro, nanao vazivazy somary vantambantana tamin'i B i A. Mihevitra i A fa azony atao ny karazana vazivazy sahala amin'io noho ny fifankahazàran'izy ireo. Saingy …
Ny valintenin'i B: Inona no mahatonga anao hihevitra hoe mifampizara fisakaizàna lalina tahaka izany isika?
Ny tahan'ny fisaikaizana lalina izay nomen'i A tamin'ny fifandraisan'izy ireo dia lehibe lavitra noho ny taha nomen'i B. Ary mamaly an'i A i B manao hoe: “Inona no mahatonga anao hihevitra hoe mifampizara fisakaizàna lalina tahaka izany isika?” Angaha isika efa nihaona vantana? Angaha isika efa nanana fotoana niarahana? Inona ity mahazo anao?”. Rehefa ampitahain'izy ireo ny tahan'ny fifanakaikezany, dia misy elanelana x.
Mateti-pitranga ny karazan-javatra sahala amin'io eo amin'ny tena fiainana. Sahala amin'ny toa misy ihany koa ny tsy fifankahazoan-kevitra eo amin'ireo blaogera roa izay tsy mihaona raha tsy amin'ny tambajotra. Ny antony dia ny tsy fanandraman'izy ireo mifanatona mba hialàna amin'ireny tsy fifankahazahoan-kevitra ireny. Manaraka ny fitsipiky ny fahalalam-pomba eo amin'ireo samy blaogera fotsiny izy ireo, tsy mitady fisakaizana lalina.
Mateti-pitranga io amin'ireo blaogera izay mikolokolo “fifandraisana tsara” io. Mitandrina tsara izy ireo mba tsy hanakorontanana ny fifandraisan'izy ireo. Ekena, manan-danja io raha toa maniry ny hitazona ny fifamaliana fifanajana sy fankasitrahana ny roa tonta. Nefa indraindray ilaina ny mametraka fifanakaikezana tena izy.
Mba hampihenana ny elanelana mampisaraka azy ireo. Midika izay fa manomboka izao dia misy teboka iray hifandraisana ny fifaneraseran'izy ety amin'ny tambajotra.
Japana 14 Janoary 2019